Parroquia de Tumbabiro, Imbabura, Ecuador
Igumbi lakho lokulala e ihostela sinombuki zindwendwe onguAdriana
I-Hostería Pantaví inikezela ngamagumbi amawele asemgangathweni, ngaphakathi kwe-hacienda entle kunye nerustic, ebekwe kumnyango omkhulu wendlu yabahambi. La ngamagumbi afanelekileyo abahlobo abafanelekileyo kunye nabahambi.
I-Hostería Museart Pantaví yeyona ndawo yohlukileyo kwaye inika umdla ebamangalisa abatyeleli bayo, ngenxa yolwakhiwo lokwenyani. Indawo nganye yenziwe ngononophelo kwaye ihonjiswe; iindonga zayo, iigadi, amagumbi kunye nemizobo eseludongeni zonke zibalisa amabali ahlukeneyo. IHostería yindawo epholileyo, efanelekileyo ukonwabela amaxesha amnandi okuphumla kunye nokunxibelelana nendalo.
Ibekwe embindini woluhlu lweentaba ezisemantla e-Ecuador, kufutshane ne-Ibarra kunye ne-Otavalo, yiHostería Museart Pantaví. Le ndawo yomlingo iyamangalisa iindwendwe zayo kunye neendawo zayo ezizodwa, izakhiwo kunye nomoya wobugcisa
Ndinika iindwendwe zam indawo kodwa ndiyafumaneka xa kufuneka